Umaki: ngemuva kokuqukethwe i-plugin | Martech Zone
Maka: ngemuva kokuqukethwe kokuqukethwe
NgeSonto, ngoJuni 14, i-2009 NgeSonto, Novemba 16, 2014 Douglas Karr
Lokhu okuthunyelwe kunqanyuliwe. Kunokuningi ekhoselweni - engikutholile okuhle ukuthi yi-After Content. Elinye lama-plugins athandwa kakhulu engiwenzele i-WordPress yiPostPost. Abantu abaningi bafisa ukwenza ngezifiso amakhasi abo, okuthunyelwe kanye nokuphakelayo kepha ukukwenza kusuka ngaphakathi kwesihleli setimu kungaba yinkimbinkimbi impela. Le plugin ikuvumela ukuthi ubhale okuqukethwe ngaphambi noma ngemuva kokuthunyelwe ekhasini elilodwa, wonke amakhasi, noma ngaphakathi nje